Ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka (fahatelo faharoa) - inona no mitranga?
Ny fe-potoam-pangorahana fohy dia miaraka amina fanovana maro ao amin'ny taovam-pananahana. Isan'andro dia hitan'ny vehivavy iray fa misy ny fahatsapana vaovao. Rehefa tonga ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka dia nanjary fantatry ny maro ny firaisana amin'ny zaza ao am-bohoka.
Herinandro 14 isaky ny fitondrana vohoka - izany hoe firy volana?
Ny kaonty rehetra mikasika ny faharetan'ny mpitsabo dia manome herinandro. Ny isan'ny bevohoka avy amin'ny fiandohan'ny fitondrana vohoka dia nitatitra tamin'ilay renim-pianakaviana nandrasan'ny dokotera manaraka. Tsara homarihina fa ny ginekôlôgy amin'ny fikajiana io karazana io ho an'ny fiandohana dia maka ny andro voalohany amin'ny farany, voatondro mialoha ny fiantombohan'ny fitondrana, ny fadimbolana. Ny faharetana amin'ny fotoana maha-bevohoka dia antsoina hoe fepetra mahazatra.
Amin'ny tranga sasany dia maniry handika ny isan'ireo herin-taona mahazatra ny vehivavy ao amin'ny fanjakana. Mora izany, saingy mila mahafantatra fitsipika sasantsasany amin'ny fandikan-teny ianao. Ireo mpitsabo tosika amin'ny fahatsorana sy ny haavon'ny matematika dia miankina iray amin'ny volana iray mitovy isa 4 herinandro, ny isan'ireo andro ao dia 30, na firy ny isan'ny ao anatin'ny kalandrie amin'izao fotoana izao. Ny vokatra dia: 14 herinandro ny fitondrana vohoka - 3 volana sy 2 herinandro. Ny efa-bolana faharoa amin'ny bevohoka dia efa nanomboka.
Ny herinandro faha-14 amin'ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny zaza?
Amin'ny herinandro 14 amin'ny maha-bevohoka dia efa voavolavola tanteraka ny foetus, saingy ny taova anatiny dia manohy ny fivoarany. Mihamitombo haingana ny taratra marefo, mitombo ny isan'ireo sela nerveau, ary misy fifamatorana vaovao eo anelanelan'izy ireo. Ny aty dia mavitrika, izay mampiavaka ny kolikoly. Ao anatin'io antilopa io dia misy fizahantany ny hematopoiesis, ary ao amin'ny tsindry dia manomboka ny famokarana meconium - ny goady voalohany, izay hanangom-bokatra mandritra ny vanim-potoana fitondrana manontolo ary tsy hiala afa-tsy ny fahaterahan'ny zazakely.
Misy fiovana ao amin'ny rafi-pandaminana. Ny pancreas dia mamokatra enzymes izay mamotika ny zavatra azo avy amin'ny fanafody tsotra. Ny rafi-panafody dia manomboka ny fiofanana - ny foetus dia mahatonga fihetsiketsehana amin'ny rivotra noho ny diaphragm. Izany dia manampy amin'ny fanamafisana ny fitaovan'ny muscular, manomana ny taova momba ny taovam-pananahana ho an'ny atidoha voalohany.
Herinandro 14 isaky ny fitondrana vohoka - habaka fetra
Mifanaraka amin'ny fivoaran'ny taova anatiny, dia mitombo ny habetsahan'ny foetus mandritra ny 14 herinandro ny fitondrana. Amin'izao fotoana izao, ny halavan'ny vatany avy eny an-tampony mankany amin'ny halavany dia 9 santimetatra. Io isa io dia salama, misy ankizy ary lehibe kokoa. Ny fitomboana dia endriky ny fampiroboroboana, izay vokatry ny fitiavan-janaka: ny ray aman-dreny ambony dia manana ankizy manana fitomboana mihoatra ny salan'isa sy ny mifamadika.
Tsy dia lehibe loatra ny lanjan'ny vatan'ny foetus. Ity mari-pamantarana ity dia mifototra amin'ny tahan'ny metabolika eo amin'ny vatana mangatsiaka. Amin'ny ankapobeny, ny lanjan'ny foetus, rehefa manomboka ny herinandro faha-14 amin'ny fitondrana vohoka, dia mahatratra 45-50. Tokony hojerena fa ny lanjan'ny zazakely hoavy dia miankina amin'ny toetran'ny rarin-tsakan'ny vehivavy bevohoka: miaraka amin'ny voka-dratsin'ny kômôhy, ny tavy, ny lanjan'ny zaza vao teraka dia ho ambony indrindra.
Herinandro 14 isaky ny fitondrana vohoka - ny fivoaran'ny foza
Amin'ny vanim-potoan'ny fitondrana mandritra ny 14 herinandro, ny fampiroboroboana ny foetus dia midika ho fanatsarana ny rafi-pitabatabana. Amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany goavam-be amin'ny asan'ny motera ny zazakely ho avy. Ny famafana ny reflexes voalohany dia misy: rehefa manao ny ultrasound ianao, dia afaka mahita ankizy mametaka rantsantanana. Misy ny fahaiza-manao manokana - ny zaza dia manomboka mamono ny taolam-paty.
Milaza ny mpitsabo fa amin'izao fotoana izao, ny zazakely dia afaka mamantatra ny tsirony sy ny fofona amin'ny sakafo izay mihinana azy. Ny fampandrosoana ny tadim-peo sy ny trakta momba ny taovam-pisefoana dia mifarana, fa ny feo voalohany amin'ny penina dia manomboka amin'ny fotoana fiterahana. Misy fampiroboroboana ny hozatry ny tarehy, miaraka amin'ny fanampian'ilay zazakely amin'ny daty atsy aoriana dia hanomboka haneho ny fihetsika manoloana ny zava-mitranga (manosihosy, mamirapiratra, mihodina).
Inona no itovian'ny foetus amin'ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka azy?
Ny zaza ao anatin'ny 14 herinandro dia tsy mitovy amin'ny zaza vao teraka. Ny faritra manontolo ao amin'ny vatany dia rakotra lamosina malefaka - lanugo, ary ny hoditra dia mena ary karavasy be dia be. Rehefa mihalehibe ny zazakely, dia hanjavona izy ireo. Misy fiovana eo amin'ny endriky ny karandohany. Ny maso dia mirakitra ny hodi-maso, mbola mihidy izy ireo, fa ny elanelana eo anelanelan'izy ireo dia mitombo. Mipoitra ny hoditra, ny orona, ny takolaka. Ny vozon'ity zaza ity dia lasa maneho hevitra.
Mpivadi-pinoana tamin'ny herinandro faha-14 ny bevohoka
Ny zaza amin'ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka dia efa mibaribary ny asan'ny motera, saingy ny fihetsiny dia tsy manana fandrindrana, hery ambany ary amplitude. Amin'izao lafiny izao, mbola tsy tsikaritry ny vehivavy ny hetsika nataon'ilay zazakely ho avy. Ny fifandraisana akaiky eo amin'ny renim-pianakaviana sy ny zazakely ho avy dia manakaiky kokoa ny herinandro faha-20 amin'ny fitondrana vohoka. Ny vehivavy manana tovovavy faharoa dia afaka manamarika ireo hetsika kelikely vao haingana - fifindrana 18 herinandro eo ho eo. Na izany aza, eny fa na dia ao anatin'ny fotoana mampihetsi-po aza dia malemy loatra izy ireo fa tsy ny vehivavy bevohoka rehetra no mahatsapa azy ireo.
Herinandro 14 isaky ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny reniko?
Manambara, amin'ny fiovana izay mitondra fiovana 14 herinandro ho an'ny fitondrana vohoka, izay mitranga ao amin'ny vatan'ny reny amin'ny hoavy dia ilaina ny manavaka ny fiovan'ny hormonal background. Ny fiheveran'ny progesterone amin'ny maha-bevohoka dia mihamitombo be, izay hita taratra amin'ny endrik'ilay vehivavy bevohoka. Noho izany, eo amin'ny sisin'ny vavoniny no misy ny fonony mainty, miala avy eo amin'ny elatra eo amin'ny fiotazana.
Ny fanovana ny pigmentation dia hita ihany koa ao amin'ny faritra misy ny trôasy: ny faritra okolosika dia manjary maitso mainty, ary ny ampongabendanitra dia mihamitombo ny habeny. Mihamahalemana kokoa io faritra io - Ny fahazazana sy fahazavana eo amin'ny tratra dia mety hiteraka fifandirana sy tsy fahampiana. Mihabetsaka ny volony, mihalehibe izy io, ary zato no mahatonga ny vehivavy hanadino ny habeny.
Ny herinandro faha-14 amin'ny bevohoka - fahatsapana vehivavy
Amin'ny vanim-potoan'ny fitondrana mandritra ny 14 herinandro, ny fampiroboroboana ny foetus sy ny fahatsapana ny reny hoavy dia mifandray amin'ny fitomboana haingana amin'ny tranonjaza sy ny zaza. Izany dia mitarika amin'ny fiheverana fa manomboka miova tsikelikely ny fihenan'ny rindran-damina. Vokatry ny fiovana toy izany, ny vehivavy dia manoratra ny fisehon'ny fihetseham-po mampalahelo ao amin'ny faritra manasitrana. Mba hampiroboroboana ny bika aman'endriny dia mety ho kiraro avo amin'ny kiraro, ka ny dokotera manoro hevitra ny handao ny kiraro toy izany.
Na izany aza dia misy fiovana tsara amin'ny fahasalaman'ny vehivavy bevohoka. Ho an'ny vehivavy maro izay mahatsapa fihenanam-po sy fandoavana vetivety, ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka dia manjary mandra-pahatongan'ny fotoana tsy misaraka tanteraka. Fanehoan-kevitra momba ny toxikose, izay maherin'ny iray volana bevohoka ny vehivavy, mbola mijanona amin'ny lasa. Amin'ny ankapobeny, ny fahatelo fahatelo amin'ny maha-bevohoka dia vanim-potoana tony raha misy vehivavy manana fahafahana hankafy ny fizotry ny fitondrana.
Ny tranon-jaza amin'ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka dia amin'ny ankapobeny dia eo afovoany eo anelanelan'ny famokarana pubika sy ny elatra. Rehefa manombana ny fizotry ny fitondrana, ireo mpitsabo dia mihaino tsara ny haavon'ny tranon'ny tranonjaza, izay tokony ho 14 santimetatra (ny elanelana avy eo amin'ny sisin'ny tranombakoka ka hatrany amin'ny farany ambany). Ny fiovana toy izany dia mety tsy hisy fiantraikany amin'ny habeny sy ny endriky ny kibony - dia tonga dia hitan'ny hafa avy hatrany io fotoana io.
Ny fitomboan'ny kibo dia voamarika ao amin'ny faritra ambany. Ankoatra izany, amin'ny vehivavy manja dia mahamarika kokoa noho ny vehivavy. Mihamitombo tsikelikely ny habetsahan'ny tovovavy, arakaraka ny habetsahan'ny foetus, ka mihamitombo tsikelikely ny dibera. Mandritra izany fotoana izany dia tsy ambony ny fototry ny tranonjaza, saingy amin'izao fotoana izao, ny vehivavy dia afaka manamarika ny tsindrian'ny uterus ao amin'ny taolam-paty eo an-toerana - ny fikolokoloana dia lasa tranga matetika.
Fandrosoana mandritra ny 14 herinandro ny fitondrana
Ny fitsaboana amin'ny vaginia mandritra ny efatra ambinifolo herinandro vohoka dia tsy manova ny toetrany. Izy ireo dia tsy azo itokisana, mangarahara na fotsy amin'ny loko, tsy misy loto sy fampidiran-dra ivelany. Ny fiaraha-miombon'izy ireo amin'ny vehivavy bevohoka dia mety miovaova, izay mifandray amin'ny fatiantoka tsikelikely amin'ny fifindran'ny progesterone . Ny haavon'ny hormonina ao amin'ny rà dia hita taratra amin'ny trimestre voalohany, rehefa tena manan-danja tokoa ny fambolena.
Ny fiovana eo amin'ny fifantohana, volombava, loko, karazan-tsakafo vaginal nandritra ny fitondrana vohoka dia afaka manondro ireo olana ao amin'ny rafitra fananahana. Ny aretina matetika amin'ny vehivavy izay miomana ho tonga reny dia manjavozavo . Ity patolojia ity dia miaraka amin'ny fitomboan'ny voan'ny kanseran'ny Candida, izay hita ao amin'ny mikroflora amin'ny vagina ny vehivavy tsirairay. Raha mifandray amin'ny fiovana ao amin'ny asidra ao amin'ny vagina mandritra ny fitondrana vohoka, dia misy ny fepetra tsara ho an'ny fanorenana ity holatra ity. Ny vehivavy bevohoka dia manamarina tsiranoka fotsy vita amin'ny fototarazo, miaraka amin'ny fofona, mandoro.
Ny fijaliana amin'ny herinandro faha-14 amin'ny maha-bevohoka
Araka ny nomarihina etsy ambony, ny telo ampahatelon'ny vehivavy bevohoka dia ny vanim-potoana mamaivay indrindra sy mahamaika. Fitaovana Pejy mirohy eto Novaina Handefa rakitra Pejy manokana Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa ᏣᎳᎩ Cebuano Cebuano کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Ny fanitsakitsahana ny fomba fiasa amin'ny lahy sy ny vavy dia azo lazaina fa mampihetsi-po lalina ao ambany kibo. Ny fanaintainana mafy sy mafy dia mafy, toy ny fanoherana, dia mety ho famantarana ny fanalan-jaza. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, miaraka amin'ny fisehoana an- tsiran - dra avy ao amin'ny fivaviana izy ireo, izay no antony mahatonga ny vehivavy bevohoka amin'ny hopitaly.
Ny fampisehoana ny tsy fahampian-tsakafo kely sy tsy fahita firy amin'ny teny fohy dia vokatry ny fikarakarana ny ligaments amin'ny kelikely ary ny fampitomboana ny haben'ny tranonjaza. Mandritra izany fotoana izany dia tsy isan'andro ny fanaintainana, mitombo tsindraindray, aza mitombo amin'ny fotoana. Tsy maharitra ny faharetan'ny fanafihana maharary. Matetika dia mety hitera-doza ao amin'ny faritra lonaka, izay vokatry ny fitomboan'ny diera.
14 herinandro ny fitondrana vohoka - ultrasound
Ny fe-potoana 14 herinandro ho an'ny fitondrana vohoka dia tsy fotoana mety ho an'ny ultrasound. Matetika dia io fandinihana io no natomboka tamin'ny herinandro 12 . Na izany aza, raha misoratra anarana ho an'ny bevohoka ianao dia afaka mandalo izany ny vehivavy. Rehefa manao fanatanjahan-tena izy ireo, ny dokotera dia mandinika tsara ireo fampahalalana fototra momba ny fivoarana ara-batana fetal, ireo singa manokana amin'ny rafitra ao amin'ny taova anatiny. Cisco C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C + Ny fijerena aloha ny aretina amin'ny fiterahana dia ahafahan'izy ireo manitsy azy ireo, ary misoroka ny fandrosoana.
Ireo loza amin'ny herinandro faha-14 amin'ny fitondrana vohoka
Ny fahasarotana amin'ny ankapobeny dia ny fihenan'ny foetus . Amin'ny fampivoarana azy, ny zazakely amin'ny herinandro faha-14 amin'ny fampanjariana dia tsy mitsahatra maneho marika fiainana. Raha ny fandinihana ny fanampian'ny aretim-poana hodi-maso dia tsy azo henoina, ny foetus mihitsy aza dia tsy maneho fihetsiketsehana maotera. Ny làlana tokana ivelan'ny toe-javatra dia ny fanalan-jaza amin'ny fampidirana ny fifindran'ny aretim-bovoka. Ny C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Azo atao ve ny misotro divay amin'ny vehivavy bevohoka?
Sakafo mandritra ny fitondrana vohoka
Oviana no mitoetra ny toxicose amin'ny vehivavy bevohoka?
Pharyngocept - torolàlana amin'ny fampiasana azy amin'ny fitondrana vohoka
Actovegin nandritra ny fitondrana vohoka
Nahoana ianao no tsy te hanao firaisana mandritra ny fitondrana vohoka?
Zaza bevohoka mandritra ny fitondrana vohoka - famantarana
Geoxon amin'ny fitondrana vohoka
D-dimer amin'ny fitondrana vohoka - ny fitsipika
Fahamendrehana amin'ny fitsirihana ny fitondrana vohoka
Volom-bolo manjelanjelatra ho an'ny volo
Ny tongotra lava indrindra eran'izao tontolo izao - iza no tompony?
Fahitana ho an'ny sary fitifirana
Brownie miaraka amin'ny mascarpone
Ireo bitro 35 hahatonga anao ho tsara kokoa ny andro iainanao!
Voninkazo avy amin'ny voankazo kafe
Ahoana no fomba hamaliako batterin-doza ao an-trano?
16 zavatra ampiasain'ny ankohonana amin'ny fitsaboana aretina samihafa
Kim Kardashian dia niseho an-dalam-pita tamin'ny akanjo lava mangarahara tsy misy sandry
Tiles for terracotta
Toro-kase fohy ho an'ny Kitchen
Hernia belly - fitsaboana tsy misy fandidiana
Volon'ireo vehivavy Summer 2013
Miala tsiny amin'ny lehilahy?
Fifandirana momba ny coccyx - fitsaboana
Kirira tsy misy lanjany intsony